यहाँ छ गुइलर्मो डेल टोरो को २ 25 भन्दा बढी वर्ष! - iHorror
घर हरर मनोरन्जन समाचार यहाँ छ गुइलर्मो डेल टोरो को २ 25 भन्दा बढी वर्ष!
यहाँ छ गुइलर्मो डेल टोरो को २ 25 भन्दा बढी वर्ष!
by शॉन होर्टन अक्टोबर 9, 2017
द्वारा लिखित शॉन होर्टन अक्टोबर 9, 2017
त्यहाँ धेरै नामहरू छन् डरावनी प्रशंसकहरूलाई अविश्वसनीय निर्देशकहरू, लेखकहरू, र निर्माताहरूको रूपमा: अल्फ्रेड हिचकक, वेस क्रेभन, जर्ज रोमरो। अब देखि १०, बीस, तीस वर्ष, तिनीहरू पनि जेम्स वान, एली रोथ, र पक्कै, गुइलर्मो डेल टोरो जस्ता व्यक्तिहरूको बारेमा कुरा गरिरहेका हुनेछन्।
अक्टूबर 9th, १ 1964 .XNUMX मा मेक्सिकोको गुवाडालजारा, जालिस्को, मेक्सिकोमा जन्मे डेल तोरोले फिल्म निर्माणमा प्रारम्भिक चासो देखायो र त्यसबेलादेखि यसमा मेहनत गरिरहेछु। उहाँको पहिलो ब्रेक-आउट टुक्रा थियो Cronos १ 1993 XNUMX in मा, मेक्सिकोमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विस्तार गर्नु अघि पहिलो जारी गरियो। फ्रेडेरिको लुप्पी र रोन पर्लम्यानले अभिनय गरेको भयावह चलचित्रले प्रभावशाली बाईस पुरस्कार कमायो।
उसको अर्को फिल्म १ 1997 XNUMX's को साथ हलिउडमा पहिलो कदम थियो नक्कलजुन कुनै पनि हालतमा फ्लप नभएर, जसलाई कसैले ब्लकबस्टर कल गर्ने थिएन। नक्कलहलिउडले चीजहरू चलाउने तरिकामा केही विच्छेदनको साथ स्वागत गरेको स्वागत, गुइलर्मो डेल तोरोलाई मेक्सिको फर्कन प्रेरित गरियो र आफ्नै उत्पादन कम्पनी फेला पार्‍यो, जुन २००१ को उत्पादन शैतानको मेरुदण्ड, अर्को महत्वपूर्ण सफलता। त्यसपछि उनी हलिउड फर्के, को लागी निर्देशकीय कामहरू लिए ब्लेड २, सामान्य अमेरिकी दर्शकहरूलाई डेल टोरो ब्रान्डको पहिलो कडा स्वाद दिँदै।
स्वादofcinema.com को तस्वीर शिष्टाचार
त्यसबेलादेखि गुइलर्मो डेल टोरो शानदार फिल्महरू बनेर त्यस्ता फिल्महरू बनाउँदैछन् Hellboy र यो अनुक्रम हो, पान को लेबिरिन्थ, र प्रशान्त रिम। उनले २०१० को लागि पटकथा पनि लेखेका थिए अँध्यारोबाट नडराउनुहोस्, होबिट त्रयी, क्रिमसन पीक, र सम्पूर्ण रन तनाव टेलिभिजन मा।
हाल, उहाँ आफ्नो कालो अद्भुत मनलाई क्लासिक कथामा फैलाउन काम गर्दै हुनुहुन्छ Pinocchio, साथै शीर्षक नयाँ टेलिभिजन श्रृंखला कार्निवल पंक्ति.
तर चलचित्रहरू सबै उसले काम गरिरहेको छैन। यस वर्षको सुरूमा उनी गाउँलेमा आधारित अद्वितीय टकिला सिर्जना गर्न प्याट्रॉनसँग सामेल भए.
Foodandwine.com को तस्वीर शिष्टाचार
त्यसो भए, गुइलर्मो डेल टोरो र एक धेरै भन्दा धेरै वर्षहरुमा उनीहरुसंग अरु धेरै बित्ने, स्वर्गीय दर्शनहरु संग दुनिया संग साझा ग्लास!
Syfy.com को विशेष चित्र सौजन्य
guillermo del toroगुइलर्मो डेल टोरो फिल्महरूHellboyहरर निर्देशकप्रशान्त रिमpans labyrinthशैतानको मेरुदण्ड
शॉन होर्टन साइ-फाई / हॉरर उपन्यास हन्ना र कक्षा 5, साथै क्रिप्टि hor डरावनी सेनोटेका लेखक हुन्। उनी सियाटल शहर र ओलम्पिक राष्ट्रिय वनको जंगलका बीच क्र्याम गरिएको सुन्दर प्रशान्त उत्तरपश्चिमबाट लेख्छन्। उनी Hor बर्षको उमेरमा ग्रिमलिन्सलाई देखेर सुरूवात गरीरहेछन्, उनी डरावनीको लाइफ-फ्यान हुन्। वर्षौंपछि, उसले स्टीफन कि ofको काम फेला पारे, राती आफूलाई जाँच्दै आईटी भनेको टोम पढेर। त्यसबेलादेखि, उहाँ डीन कोन्ट्ज जस्ता लेखक, एल्म स्ट्रीट र एलियनमा नाइट सपना जस्तो फिल्महरू, र डेड स्पेस र रेसिडेन्ट एविलको भिडियो गेम श्रृंखला मार्फत रुचि विस्तार गर्दै हुनुहुन्छ।
'शुक्रवार १ 13 औं' अभिनेत्रीले वाइनस्टेन उत्पीडनको खुलासा गर्‍यो
Sc१ डरलाग्दो कहानी रातहरू: अक्टुबर 31th "रेवेन"